Fitaovana fametahana tariby 5 ho an'ny prototyping haingana | Famoronana an-tserasera
Fitaovana 5 fametahana tariby ho an'ny prototyping haingana
Jorge Neira | | Fitaovana famolavolana
Ny fitaovana Wireframing Nampiasaina izy ireo mba hamoronana ny endrika azo ampiharina indrindra izay azo jerena na amin'ny fampiharana na amin'ny tranokala.
Amin'ny ankapobeny, izy ireo dia ampiasaina hampivelatra ireo interface tsara manintona sy mahasoa indrindra ao anatin'ny tsy manam-petra ireo pejin-tranonkala misy ankehitriny ary izany dia ny safidin'ny ankamaroan'ny mpandrindra amboary ny fifandraisan'ny mpampiasa anao miaraka amin'ity karazana fitaovana ity, ka eto izahay dia hanolotra fitaovana Wireframing 5 ho an'ny prototyping haingana.
1 Fitaovana fanaovana tariby mahatalanjona
Fitaovana fanaovana tariby mahatalanjona
Na dia eo aza ny fomba maro izay hitantsika anio amin'ny Internet, ny fitaovana Wireframing dia azo antoka fa iray amin'ireo fampiharana sy mahomby indrindra ao anatin'ny sehatry ny an'arivony misy ankehitriny sy amin'ireo serivisy mahomby indrindra atolotry ny wireframing, manana ireto manaraka ireto izahay:
Izy io dia iray amin'ireo fitaovana mahomby indrindra misy, satria amin'ny alalany, azo atao ny mamorona rindranasa HTML toy ny tranokala ambanin'ny asa rehetra misy azy ireo. Ankoatr'izay, ny fifandraisana sy ny sarimiaina dia lafiny lehibe, izay namboarina i Justinmind.
Ity rindrambaiko ity dia ahafahanao mamorona tranokala ho an'ny sehatra finday, ka mampitombo ny isan'ny fifamoivoizanao amin'ireo rindranasa noforoniny rehetra. Tsy isalasalana fa fitaovana tena ilaina sy miaraka amin'izay koa izy io satria manandrana manarona ireo singa ilaina rehetra indrindra ho an'ny famoronana endrika tranonkala, ary koa ny fifandraisana amin'ny mpampiasa hafa.
Izy io dia iray amin'ireo fitaovana midadasika misy ao anatin'ny famolavolana tranonkala, satria izy io dia manana endrika repertoire be dia be indrindra misy.
Ny fitaovana matanjaka dia manome anao fahombiazana mahomby ao anatin'ny fampiharana isan-karazany. Afaka manangana prototypes, kisary ary workflows amin'ny multi-application, manombatombana azy mandritra ny fivoarany miandalana.
Ity fitaovana ity dia transendental, satria ny asany dia mihoatra ny famaritana ny fanesoana hita maso tsotra. Ity rindranasa ity dia afaka manao prototypes HTML fifampiresahana, izay mahatonga ity fitaovana ity ho asan'ny tonian-dahatsoratra HTML WYSIWYG HTML, afaka mamorona karazana HTML prototypes rehetra aza izy, mamela ny mpampiasa azy hanao ny maodely rehetra hitany fa ilaina.
Izy io dia fitaovana somary mahomby kokoa, satria manana repertoire lehibe fitaovana, ary koa ny fahaizany mahatanty fitaovana haingana miaraka amin'ny ora fiasana mavesatra.
Ao amin'ny repertoire-ny, manana fitaovana hangataka tambiny amin'ny karazana fampiharana wireframing hafa izy, hahatratrarana azy manatanteraka ny fizotry ny famolavolana amin'ny fampiharana iray. Afaka manamboatra wireframes marobe ianao, mamorona prototypes HTML kalitao, ary koa manangona ny hevitry ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fomba fanangonana data. Izy io dia afaka manolotra rindranasa ho an'ny Android sy iPhone.
Izy io dia fitaovana somary tsotra, izay maka referansa amin'ny tranonkala ho mpamorona tariby haingana sy haingana.
Ity karazana fampiharana ity dia tena kendrena, izany hoe mamela famolavolana mahomby kokoas, fa tsy mifantoka amin'ny fanatanterahana fitaovana. Na dia tsy mahery vaika indrindra amin'ny rindranasa rehetra aza izy, dia manandrana manatanteraka ny lahasa rehetra tadiavina amin'ny fampiharana Wireframing. Somary voafetra ny repertoire-n'izy ireo, ny lisitr'ireo fitaovana ireo dia somary mora tohina amin'ny resaka fitazomana zavatra tsotra.
Ireto ny sasany amin'ireo fitaovana fanaovana tariby matetika kokoa izay hitantsika amin'ny Internet sy ny tsirairay avy miaraka amin'ny lafy tsarany sy lafy tsarany.
Hiankina amin'ny filàna sy ny fangatahan'ny mpampiasa izany, izay, tsy maintsy mazava aminy ny antony lehibe ampiasainy fitaovana wireframing sy izay tanjona kendreny, izay hahitany ireo fitaovana mahomby indrindra mifototra amin'ny rehetra amin'izy ireo. izay ilainao.
Ny rehetra dia mazava momba ny asanao famolavolana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Fitaovana 5 fametahana tariby ho an'ny prototyping haingana
Manamboara lamina tsara kokoa ho an'ny endrika fifandraisana